Fifidianana 2018 – Kandidà 3 nampahafantatra ny loharanom-bolany, kandidà 2 nanaja ny Dina
Publié novembre 3, 2018 par Book News
Mitohy ny fanaraha-maso ireo kandidà nanasonia ny Dina ara-pitsipi-pitondra-tena sy fahitsiana. Raha zohina hatreto, vitsy amin’izy ireo no nanaja ny Dina nosoniaviny.
Ireo kandidà 36 nirotsaka hofidiana tamin’ity fifidianana 2018 ity.
Kandidà 3 amin’ireo 36 ihany hatreto no efa nampahafantatra ny loharanom-bolany eny anivon’ny Transparency International, izay misahana izany miaraka amin’ireo rantsa-mangaika hafa manara-maso ny fifidianana. Rasolofondraosolo Zafimahaleo na Dama, kandida laharana faha 4, Rabary Paul, laharana faha 8 sy Zafivao Jean Louis, laharana faha 29 no efa nameno ny antontan-taratasy mahakasika izany. Mbola tsy nisy nanatitra kosa ny kandidà hafa ary entanin’ny firaisamonim-pirenena hanao izany mialoha ny fifidianana.
Anisan’ireo kandidà nanasonia ny Dina ara-pitsipi-pitondratena ary nanaja ny Dina kosa ny kandidàa laharana faharoa, Rakotofiringa Richard Razafy, sy ny laharana fahafolo, Radavidson Andriamparany B. Nanao an-tsitrapo ny fanambaram-pananana, sy izay mety ho tombontsoa ara-toe-karena, eo anivon’ny Bianco na dia tsy teren’ny lalàna hanao izany aza izy ireo.
Tsy nanaja ny Dina
Anisan’ireo kandidà voalaza fa tsy nanaja ny Dina kosa tao anatin’ny vanim-potoana nanomboka ny 25 oktobra ka hatramin’ny 31 oktobra lasa teo ireto kandida manaraka ireto:
– Laharana 9: Saraha Rabeharisoa
– Laharana 22: Mahafaly Olivier
– Laharana 23: Radilofe Mamy Richard
– Laharana 27: Ravelonarivo Jean
– Laharana 28 : Randriamorasata Solo Norbert
– Laharana 30 : Rasolonjatovo Falimampionona
– Laharana 36 : Rasolovohangy Roseline Emma.
Tsy nanao ny fanambaram-pananana teny anaivon’ny Bianco mantsy izy ireo.
– Laharana 12: Rajaonarimampianina Hery : tsy nanilika izay mety ho endrika kolikoly rehetra, indrindra fa ny fividianana safidy sy ny feon’ny fireritreretana amin’ny alalan’ny fizarana entana na vola ;
– Laharana 8 : Rabary Paul
– Laharana 12 : Rajaonarimampianina Hery
Voalaza fa mampiasa mivantana na ankolaka izay mety ho tombontsoa, enti-manana sy fahefana azo amin’ny Fanjakana sy ireo rantsamangaikany na izay rafi-panjakana sy rafitra miankina amin’ny Fanjakana.
– Laharana 24 : Ernaivo Fanirisoa : voalaza fa nampiasa fomba fiteny voalanjalanja, nitratrevatreva ary naneho fihetsika aman-toetra tsy nifanaraka tamin’ny kolontsaina Malagasy.
Kandidà hafa anaovana tsindrim-paingotra
Ankoatra ireo voalaza ireo, misy ireo kandidà izay tsy nanasonia ny Dina nefa hita fa mila arahi-maso sy anaovana tsindrim-paingotra manokana, dia ny kandidà laharana 13, Andry Nirina Rajoelina, sy ny laharana 25, Marc Ravalomanana.
Manao antso avo ny Komity iombonana, ny amin’ny hanajan’izy ireo ny fotokevitra hizorana ho amin’ny fifidianana marina sy milamina, izay tokony ho lalain’ireo rehetra mirotsaka ho amin’ny andraikitra fara-tampony izay katsahin’izy ireo fatratra.
“Ny Komity dia mahatsikaritra arakaraky ny maha akaiky ny androm-pifidianana no mampitombo ireo karazana herisetra ara-batana, rahom-bava sy ara-tsaina. Mampahatsiahy an’ireo Mpilatsaka ho fidiana ny Kômity Iombonana, fa tokony handray ny andraikiny amin’ireo mpanohana azy izy ireo, ka izay voakasik’izany dia mba hampitsahatra an’ireo tranga nahitana herisetra, ompa na fihestika mifanohitra amin’ny lalàna ary tsy mendrika ny soatoavina Malagasy”, hoy ny filazana ho an’ny mpanao gazety.